sosegado : October 2011
ခင်မိုးဝါ၊ မီမီအေးနှင့် ကျော်နိုင်စိုး၏သမီးလေး ခင်ရူပါစိုး
ဒီနေ့ အေမီအောင် တစ်ယောက် တော်တော် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည်၊ စိတ်ဗျာများနေသည်ဟုပြောလျှင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်။
ဒီလိုအလုပ်မျိုးကို အေမီအောင် မလုပ်ချင်ပါ၊ သူလုပ်နေရခြင်းက ဘာသာပြန်လုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်၊ သူ၏အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါ အကူအညီပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော် တစ်ခါကူညီမိရာမှ နှစ်ခါသုံးခါ ဒီနောက်မှာတော့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာခဲ့သည်၊
ပို၍ရှင်းပြရလျှင် လူနာ၊ လူနာရှင်တွေနဲ့ ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံအမှုထမ်းတွေကြား ဘာသာစကား ပညာရပ်စကားတွေကို ဘာသာပြန် လုပ်ပေးနေရခြင်းဖြစ်သည်၊ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ကိုနားမလည်သော လူနာရှင်တွေကို ကျမလည်း ဆရာဝန်ပါလို့ ပြောယူရတဲ့အထိ စိတ်ရှည်ခဲ့ရသည်။
ဒီနေ့ case ကတော့ အေမီအောင် တစ်ခါမှ မကြုံဘူးပါ၊ ထိုအတူ ဒီ JJ ဆေးရုံကြီးနှင့် ဆရာဝန်တွေလည်း မကြုံဘူးပါ၊ ကြားထဲဘာသာပြန်ပေးသူ အေမီအောင် တောင် စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်နေရလျှင် လူနာ၊ လူနာရှင်၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေဆို ဘယ်လိုနေမလဲ မတွေးမိတော့ပါ၊ ဆေးရုံရော လူနာရှင်တွေရော တောင်းပန်ချက်အရ ညတောင်အိပ်ရမည်ထင်သည်၊ သူကလည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ဆရာဝန်စိတ်တွေကြောင့် အဆုံးထိ ကူညီရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
လူနာ နာမည်က ခင်မိုးဝါဖြစ်သည်၊ မွေးလူနာလို့ပြောလျှင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်၊ သူ့အမျိုးသားနာမည်က ကျော်နိုင်စိုးဖြစ်သည်၊ အရပ်မြင့်မြင့် ရုပ်ချောသူဟု ဆိုိနိုင်သည်၊ ရန်ကုန်လုပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအဝိုင်းမှဖြစ်သည်၊ ခင်မိုးဝါ၏မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အစ်မတို့ကိုလည်း အပြင်ခန်းမှာတွေ့ရသည်၊ သူတို့၏စိုးရိမ်စိတ်များနှင့် ဆရာဝန်များ၏ pressure များသည်လည်း အေမီအောင်ဆီသို့ ကူးစက်လာခဲ့သည်။
ခင်မိုးဝါ၏ အစ်မဆီက ကြားသိရသည်မှာ ခင်မိုးဝါသည် ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ခင်မိုးဝါ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း သိရသည်နဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး နှစ်ဘက်မိသားစု အားလုံးဝမ်းသာပျော်မြူးမိကြသည်၊ Ultrasound ထဲမှာ သမီးလေးလို့ သိရပြီးနောက်၊ ကိုယ်ဝန် ၂၄ပတ်ပြည့်သည့်နေ့က လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး သဘောတူကာ သမီးလေးကို ခင်ရူပါစိုးဟု နာမည်ရွေးခဲ့ကြသည်၊ ထိုပျော်ရွှင်မှုများသည် သူတို့အတွက် သိပ်မကြာရှည်ခဲ့ပါ၊ ၂၅ပတ်ရောက်လာသောအခါ ကိုယ်ဝန်အပ်ထားတဲ့ OG အထူးကု ဆရာဝန်မကြီးက Ultrasound ထဲမှာ ကလေးလက်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလို့ ဆိုလာသဖြင့် အားလုံးစိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်လာသည်၊ နောက်ဆုံးပိုက်ဆံရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည့်အလျှောက် စင်္ကာပူတွင် လာပြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ပထမဦးဆုံး ပိုက်ဆံရှိ မြန်မာတွေအပြများသည် Mount Marina ဆေးရုံတွင် ပြမိသောအခါ ကလေးအခြေအနေကို အတိအကျမပြောနိုင်ပေ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကလေးအခြေအနေဟုသာ မှတ်ချက်ပေးပြီး နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ကျေနပ်လောက်သော အဖြေကိုမရခဲ့သဖြင့် နောက်ဆုံး JJ ဆေးရုံကြီးဆီရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
JJ ဆေးရုံကြီးက နာမည်အကြီးဆုံး ကမ္ဘာအဆင့်အတန်းဝင် တော်ဝင်သမားတော်ပါရဂူကြီးထံ ပြသခဲ့ကြသည်၊ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီစက်ကရိယာတွေ အကူအညီနဲ့ စမ်းသပ်မှုများလုပ်ခဲ့သည်၊ ပါရဂူကြီးက ကလေးသည် ပုံမှန်လှုပ်ရှားနေကြောင်း မှတ်ချက်ချပေးသည်၊ ထွက်လာသော အဖြေတစ်ခုက မိသားစုအားလုံးကို စိုးရိမ်စိတ်များ ပိုပေးစေခဲ့သည်၊ ကလေးသည် down syndrome ဖြစ်နိုင်ချေ ၂၅%ရှိသည်ဆိုသည်၊ ထိုအတွက် စင်္ကာပူတွင်မွေးဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်၊ ခင်မိုးဝါ၊ ခင်မိုးဝါအမေနှင့် အစ်မတို့သည် စင်္ကာပူတွင် အိမ်ခန်းငှါးနေထိုင်ပြီး ကျော်နိုင်စိုးနဲ့ ခင်မိုးဝါအဖေကတော့ ကူးချည်သန်းချည်လုပ်နေခဲ့သည်၊ သူများတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတာ ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ သူ့အတွက် ဘာလို့ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်နေရတာပါလဲလို့ ခင်မိုးဝါစဉ်းစားမိခဲ့သည်။
ဒီလိုနဲ့ ခွဲစိတ်မွေးဖွားမည့်နေ့သို့ ရောက်လာခဲ့သည်၊ မခွဲစိတ်မှီ လူနာကို စမ်းသပ်ကြည့်သောအခါ မထင်မှတ်သော အခြေအနေတို့ကို တွေ့ရသဖြင့် ပါရဂူကြီးနဲ့ ဆရာဝန်တွေအားလုံး နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်၊ လူနာရှင်များလည်း ဗျာများသွားသည်၊ ခင်မိုးဝါသည် ICP disorder ဖြစ်နေသည်၊ ပြီးနောက် thrombocyte level မြင့်တက်နေသည်၊ WBC, hemoglobin လုံးဝမငြိမ်၊ သွေးတိုင်းတာမှု CBC upset ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ပါရဂူကြီးနဲ့ ဆရာဝန်တွေအားလုံး ခေါင်းခြောက်ကုန်သည၊် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လူနာကို စမ်းသပ်မှု အကုန်လုပ်ခဲ့သည် ဘာလက္ခဏမှာမပြ ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားရပါလိမ့်၊ မေးခွန်းများကို ဘယ်သူမှ မဖြေနိုင်အားကြပါ၊ သေချာတာက C section လုပ်လို့မရ လူနာ သွေးလွန် excessive hemorrhage ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားနိုင်သည်၊ ပါရဂူကြီးကတော့ လိုလိုမယ်မယ် Blood bank နှင့် Internal medicine ကို advance အကြောင်းကြားထားသည်၊ လူနာကမွေးချိန်တန်နေပြီ မဟုတ်ပါလား။
နောက်ဆုံးပေါ် ကရိယာတွေ စက်တွေသုံးပြီး စမ်းသပ်မှုမျိုးစုံကို လုပ်နေကြသည်၊ လူနာရှင်များ၏ စိုးရိမ်တကြီးမေးသံများ ဆရာဝန်များ၏ အဖြေများကြားတွင် အေမီအောင်တစ်ယောက် ဗျာများနေခဲ့သည်၊
ပါရဂူကြီး၏ What is happening! What is happening! ရေရွတ်သံက အကြိမ်မနည်းတော့၊ လူနာရှင်များ၏ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဆရာမရယ် လုပ်ပါဦး ပြောပေးပါဦး ဆိုသံများကလည်း အကြိမ်မနည်းတော့ပေ၊ ပါရဂူကြီး၏ အကြောင်းကြားချက်အရ သွေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကလေး ပါရဂူကြီးနှစ်ဦး ထပ်ရောက်လာသည်၊ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြန်သည် အဖြေကမရသေးပေ၊ ကလေးBP မကောင်းဘူးဟုပြောသံကြားလိုက်ရသည်၊ စမ်းသပ်မှုတွေထပ်လုပ်ပြန်သည်၊ ကလေး Fetal distress ဖြစ်နေပြီဆိုတာကို ဆရာဝန်လေးတစ်ယောက် အလန့်တကြား အော်လိုက်သောအခါ၊ ပါရဂူကြီးက This is I don’t want to hear ဆိုပြီး မျက်စိမျက်နှာ ပျက်၍နေပြီ၊ ကလေးကို Amniotic fluid test လုပ်ထားတာမကြာသေး အဖြေတွေက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ၊ ပါရဂူကြီး နောက်တစ်ကြိမ် Nothing is 100% accurate လို့ထပ်ပြောလိုက်သည်၊ ထိုအချိန်တွင် မွေးလူနာကလည်း ကယောင်ကတမ်းတွေ ပြောလို့လာသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်က တဆတ်ဆတ်လှုပ်လို့လာသည် ပါရဂူကြီးတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမလဲ မသိတော့ပေ၊ ထိုအချိန်တွင် ခွဲစိတ် ပါရဂူကြီးက လူနာကို မေ့ဆေးပေးလိုက်လို့ ပြောလိုက်သည်၊ သူပြောသည့်အတိုင်း မေ့ဆေးဆရာဝန်က လုပ်လိုက်သည်၊ ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိ၊ ခွဲစိတ်ပါရဂူကြီးသည် တခြားပါရဂူကြီးတွေ ဟိုစမ်းသပ်ဒီစမ်းသပ်ခိုင်းသည်ကလွဲလို့ ပထမဦးဆုံး action လုပ်ခိုင်းသူလည်းဖြစ်သည်။
လူနာမေ့မြောသွားသောအခါ ဘယ်သူမှ ဘာဆက်လုပ်ရန်မညွှန်ကြားတော့၊ ဒီအချိန်မှာ ပါရဂူကြီးက သွေးCBC လုပ်ခိုင်းလိုက်သည်၊ အမြန်ဆုံးလုပ်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်ပြန်သည်၊ ခဏနေကြာ ဆရာဝန်လေးတစ်ယောက်က everything is normal ဆိုပြီး resultကို OGပါရဂူကြီးထဲထည့်လိုက်သည်၊ ပါရဂူကြီးသည် Oh my God! လို့ဆိုပြီးရေရွတ်လိုက်ပြီး၊ C section ခွဲစိတ်မှုစမယ်ဆိုပြီး resultကို တစ်ခြားပါရဂူကြီးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်သည်၊ ပါရဂူကြီးဘဝတွင် ပထမဦးဆုံး စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှုပင်ဖြစ်သည်၊ အလွဲလွဲအမှားမှားတွေက အကြိမ်ကြိမ်ပင်၊ ဆရာဝန်ငယ်နှစ်ယောက်ကို ပါရဂူကြီးသည် အလွဲလွဲအမှားမှားတွေအတွက် ခွဲစိတ်ခန်းထဲက မောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့သည်၊ JJ ဆေးရုံကြီးသမိုင်းတွင် သမားတော်ကြီးများ ပါရဂူကြီးများ အများဆုံးပါသော ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှုပင်ဖြစ်သည်။
ပါရဂူကြီးတွေ ခွဲစိတ်မွေးဖွားနေချိန်မှာတော့ လူနာရှင်တွေ စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ငိုယိုနေကြသည်၊ အေမီအောင် တစ်ယောက်ကတော့ ပရိတ်ကြီးတရားတော်တွေကို အဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုပေးနေသည်၊ ခဏနေကြာ နပ်စ်တစ်ယောက်က အေမီအောင်နှင့် ကျော်နိုင်စိုးကို ခွဲစိတ်ခန်းထဲသို့ခေါ်သဖြင့် ဂျမ်းဆု ဝတ်စုံများလဲကာ ဝင်လာခဲ့သည်၊ အေမီအောင်တို့ နှစ်ယောက်အထဲသို့ရောက်သောအခါ ကလေးကိုဆွဲထုတ်ကာ ချက်ကြိုးဖြတ်နေပြီဖြစ်သည်၊ ပါရဂူကြီးက အေမီအောင်နားကပ်ပြီး အမေအဆင်ပြေကြောင်း ကလေးအသက်မရှုကြောင်းပြောလိုက်သည်၊ ကလေးကို ကလေး ပါရဂူကြီးက ၅မိနစ်လောက် စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး ခင်မိုးဝါမွေးသောကလေး မိန်းခလေး နာမည် ခင်ရူပါစိုး ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်တွင် သေဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်၊ ဆရာဝန်ငယ်များကို လိုအပ်သည်များကို ဆက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားလိုက်သည်၊ ပြီးနောက်ကလေးကို ကျော်နိုင်စိုးလက်ထဲထည့်လိုက်သည်။
ကျော်နိုင်စိုးသည် ကလေးလက်ထဲ ရောက်လာသောအခါ အဆက်မပြတ် ငိုကြွေးနေတော့သည်၊ ကလေးမျက်နှာတွင် မွေးရာပါ ဒဏ်ရာလိုမျိုး ခြစ်ရာကြီးတစ်ခု အပေါ်နှုတ်ခမ်းကနေ ပါးထိပါရှိကြောင်း အေမီအောင်သတိထားမိလိုက်သည်၊ ကျော်နိုင်စိုးသည် ကလေးကို အေမီအောင်ကိုပေးကာ ခင်မိုးဝါကို ဖက်၍ ငိုနေလေတော့သည်၊ ခင်မိုးဝါကား သတိမရသေးပေ၊ အေမီအောင်သည် ကလေးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ကာ ခေါင်းကလေးကို ပွတ်သတ်ပေးနေမိသည်။
မီမီအေး တစ်ယောက် လက်ချောင်းလေးများ နာကျင်မှုဒဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်ခံနေခဲ့သည်၊ ခုတော့ နာကျင်မှုက ထုံစေတတ်သလားမသိ နာမှန်းမသိတော့ပေ၊ မီမီအေးရဲ့ မျက်နှာမှာတော့ နာကြည်းမှု အပြည့်ကိုတွေ့ရသည်။
တကယ်တော့ မီမီအေးတစ်ယောက် နတ်ပူဇော်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်၊ ဘေးနားက လုပ်ဆောင်ပေးသူ ဒေါ်လုံး ကတော့ ပါးစပ်က ဘာတွေရွတ်ဖတ် နေသလဲမသိပါ၊ အရင်တုန်းကတော့ ပူဇော်ပသမှုတွေကို ဒေါ်လုံးအိမ်မှာပဲ လုပ်သော်လည်း ဒီနေ့ပိုမိုအစွမ်းထက်စေရန် ဒေါ်လုံးအကြံပေးသည့်အတိုင်း ရွာအဝင် နတ်စင်တွင် လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ ဒေါ်လုံးတို့ရွာက ကျောက်တန်းကနေ ပင်လယ်ဘက် ၄မိုင်လောက်သွားရသော ပြင်စာရွာကလေးဖြစ်သည်၊ တစ်ရွာလုံးတော်တော်များများသည် တံငါသည်များ ဖြစ်ကြသည်၊ ဒီနတ်စင်ကလည်း ရာဇဝင်နဲ့ဖြစ်သည် ဒီနတ်စင်ဆောက်၍ ပူဇော်လိုက်မှ ရွာနှင့်ရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်တို့တွင် အသေအပျောက်များ နာမကျန်းမှုများ ရပ်ကုန်ခဲ့သည်ဆို၏၊ ဒါကြောင့် ဒေါ်လုံးတို့လို ပညာသည်တွေအတွက် ဒီနတ်စင်သည် အရေးပါခဲ့သည်၊ ဒီနယ်တစ်ဝိုက်မှာတော့ အောက်လမ်းလို့ခေါ်မလား အစီအမံလို့ခေါ်မလား ဒေါ်လုံးကနာမည်ကြီးပင်ဖြစ်သည်၊ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ထိန်းသိမ်းလာသော ပညာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
ဒီကျောက်တန်း သန်လျင်ဘက်မှာ နေရာတော်တော်များများတွင် နတ်စင်အများအပြားကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သန်လျင်ဘက်တွင် နတ်စင်တစ်ရာတောင်ရှိလိုက်သေးသည်၊ ရှေးက မွန်မြို့ကြီးများ ထွန်းကားရာဒေသဖြစ်သဖြင့် ရှေးဟောင်းမွန်ရိုးရာနတ်စင်များလည်း အများအပြားရှိသည်၊ စင်တင်ထားသော နတ်များ နတ်စင်များသည်လည်း နတ်စင်တစ်စင်နဲ့တစ်စင် တူညီကြမည်မဟုတ်ပေ၊ ယခုနတ်စင်ကိုတော့ မယ်အိုနတ်စင် ခေါ်သည်ဟု ဒေါ်လုံးကပြောသည်၊ ဒေါ်လုံးအမြဲပသနေသော ရွာနတ်ပင်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့နတ်စင်တွင် ပူဇော်ထားတာတွေက အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပေ၊ ကြက်ကြော်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ငှက်ပျောသီး၊ ငါးလေးကြော်တွေဖြစ်သည်၊ အုန်းသီးကိုခွဲ အုန်းရည်တွေကို နတ်စင်ကိုဝိုင်းကာ ပက်ဖြန်းထားသည် စည်းချထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်လုံးကပြောသည်၊ နောက်ပြီး ခေတ်မှီမှီ မယ်အိုကို Max လိမ္မော်ရည်ကပ်ထားသည်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒေါ်လုံး၏လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်၊ ငါးခူကောင်အကြီးကြီးကို ပြုတ်ကာ ငှက်ပျောဖတ်နဲ့ထုတ်ကာ ပူဇော်ထားသည်၊ ဒါကမယ်အိုအကြိုက်ဖြစ်သည်၊ ဒီငါးခူကောင်အကြီးတွေက ကျောက်တန်းရေလယ်ဘုရားက ခိုးဖမ်းထားသော ဘုရားငါးများဖြစ်သည်၊ ဘုရားငါးတွေကို ဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲ ဒေါ်လုံးတို့ကတော့ ယူနေကြ လုပ်နေကြဖြစ်သည်၊ ပွဲတွေရဲ့တဘက်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းထားပြီး ငှက်ပျောအူ အကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ အသေးလေးတစ်ခုထောင်ထားသည်၊ ထိုငှက်ပျောအူများတွင် သံချွန်များ ထိုးစိုက်ထားသည်၊ အပ်တွေနဲလည်း ထိုးထားသည်၊ ငှက်ပျောအူတစ်ခုစီမှာ အပ်တစ်ခုစီက အပ်ချည်မျှင် အနီရောင်တွေကို သွယ်တန်းကာ မီမီအေး၏ လက်ချောင်းကလေးများတွင် ခပ်တင်းတင်း ရစ်ပတ်ထားသည်၊ ပြီးတော့ မီမီအေး၏ လက်ချောင်းကလေးများကို သွေးထွက်အောင် အပ်တွေနဲ့ထိုးဖေါက်ထားသည်၊ သွေးများက အပ်ချည်မျှင်ကို ပေစေရမည်ဖြစ်သည်၊ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ဒေါ်လုံးက မယ်အိုကို ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပသတော့သည်၊ မီမီအေးကတော့ ဒေါ်လုံးကသင်ထားပေးသည့်အတိုင်း ‘ငါခံသလိုနင်တို့ခံစေရမယ် ငါသမီးသေသလို နင်တို့သေစေရမယ်’ ဆိုပြီး ၁၅ မိနစ် တစ်ခါလောက်ရွတ်နေရသည်၊ ဒေါ်လုံးကတော့ ရွတ်ဖတ်လိုက် အုန်းသီးတွေကိုခွဲ အရည်တွေဖြန်းလုပ်လို့နေသည်၊ အုန်းသီးအနည်းဆုံး ဆယ်လုံးလောက်ပုံထားသည်၊ ဖယောင်းတိုင်တွေကလည်း ကာတွန်လိုက်ဖြစ်သည်၊ ဒေါ်လုံးရော မီမီအေးရော ပူဇော်နေချိန်တွင် အစာမစားရပါ၊ သောက်ရန်ဖျော်ရည်များကို ဘေးမှာချထားသည်။
အဘယ်ကြောင့် မီမီအေးတစ်ယောက် အနာခံပြီး ပူဇော်ပသနေသလဲ မေးစရာတွေရှိပါသည်၊
မီမီအေးသည် တောင်ဒဂုံဘက်ကဖြစ်သည်၊ အဖေသည် အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်၊ မီမီအေးဆယ်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့် စာပေးစာယူတက်ရင်း ရန်ကုန်မြို့ထဲက ကုန်တိုက်တစ်ခုတွင် အရောင်းစာရေးဝင်လုပ်ဖြစ်သည်၊ အလုပ်ဝင်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာတွင် ကျော်နိုင်စိုးနဲ့သိကျွမ်းခဲ့သည်၊ ဘေးကလည်းမြောက်ပေး အချစ်ကစားတတ်သော အရွယ်ဖြစ်သည့်အတွက် မီမီအေးနှင့်ကျော်နိုင်စိုးတို့ သမီးရည်းစားဖြစ်လာကြသည်၊ ကျော်နိုင်စိုးသည် မီမီအေးထက် ၆နှစ်လောက်အသက်ပိုကြီးသည်၊ မီမီအေးသည် ကျော်နိုင်စိုးကို အရမ်းလည်းချစ်သည် အားလည်းကိုးသည်၊ ဒီလိုနဲ့ရည်းစားသက်တမ်း ၃နှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှာ ကျော်နိုင်စိုးကို သူ့အိမ်ကမိန်းမပေးစားဖို့စီစဉ်ကြသည်၊ ကျော်နိုင်စိုးက သူ့တွင် မီမီအေးရှိနေပြီလို့ အိမ်ကိုမပြော၊ ပိုရှုပ်ထွေးစရာက မီမီအေးတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့သည်၊ ကျော်နိုင်စိုးက အခြေအနေအရ အိမ်ကပေးစားသည့်မိန်းမကို ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဘက်တွင်လည်း မီမီအေးကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည်ဖြစ်ကြာင်း ပြောသည်၊ ကျော်နိုင်စိုးကို ချစ်သောစိတ်နဲ့ မီမီအေးတစ်ယောက် ကျော်နိုင်စိုးပြောသမျှ ယုံဖြစ်ခဲ့သည်၊ ကိုယ်ဝန်၆လလောက် ရှိလာချိန်မှာ ကျော်နိုင်စိုးတစ်ယောက် မီမီအေးကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရန် စည်းရုံးသည်၊ အသက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမျိုးမျိုးငြင်းဆန်ပေမဲ့၊ ကျော်နိုင်စိုး၏ အပြောထဲတွင် မီမီအေးယုံကြည်ကာ ကိုယ်ဝန်ချက်ချဖို့ သဘောတူခဲ့သည်၊ ကျော်နိုင်စိုးက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးသော ဆေးခန်းကိုခေါ်လာက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခဲ့သည်၊ မီမီအေးတစ်ယောက် မသေရုံတမယ် ခံခဲ့ရသည်၊ ရက်စက်စွာ ဖျက်ချခံရသော ၆လလွယ်ထားသည့် မိမိသန္ဓေသားလေးကို မိမိကိုယ်တိုင်သဂြုင်္ိဟ် ခဲ့သည်၊ သမီးလေးလို့သိရသည်၊ သန္ဓေသားလေး၏မျက်နှာမှာတော့ ဖျက်ချစဉ်ကရခဲ့သော ဒဏ်ရာများနဲ့ဖြစ်သည်။
ပြောထားသည့်အတိုင်း မီမီအေးတစ်ယောက် ကျော်နိုင်စိုးကို စောင့်နေခဲ့သည်၊ ကျော်နိုင်စိုးတစ်ယောက်ကတော့ ပေါ်မလာတော့ပေ၊ တစ်နေ့မှာတော့ စောင့်နေသူမပေါ်လာပဲ မထင်မှတ်သောသူကရောက်လာခဲ့သည်၊ ရောက်လာခဲ့သူကတော့ ကျော်နိုင်စိုး၏မိန်းမ ခင်မိုးဝါပင်ဖြစ်သည်၊ ပိုက်ဆံမက်လို့ ငါ့ယောက်ျားကို လက်မလွတ်နိုင်တာလား ဆိုပြီး ရန်ဖြစ်ပါးရိုက်၊ ပိုက်ဆံထုတ်များနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီး ပြန်သွားခဲ့သည်၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစဉ်က ဒဏ်ရာနဲ့ နလန်မထူနိုင်သေးမို့ မီမီအေးတစ်ယောက် ဘာမှာပြန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ၊ ကျော်နိုင်စိုးကတော့ ပေါ်မလာခဲ့ပါ၊ မီမီအေးကို ဘာအဆက်အသွယ်မှလည်း မလုပ်တော့ပါ၊ မီမီအေးနှင့် ကျော်နိုင်စိုးတို့ ဇာတ်လမ်းရပ်သွားပြီလို့ပြောနိုင်ပါသည်။
ခင်မိုးဝါကပင် မီမီအေးအကြောင်းကိုသိသွားပြီး ကျော်နိုင်စိုးကို မီမီအေး၏ ကိုယ်ဝန်ကိုသွားဖျက်ချခိုင်းခြင်းဖြစ်သည် ဟုသိခဲ့ရသည်၊ ချစ်သူကိုယုံကြည်လွန်းခဲ့သော မီမီအေး၏ အမှားပင်ဖြစ်သည်။
ဒါဆို မီမီအေးတစ်ယောက် ကျော်နိုင်စိုးကို မုန်းသင့်ပါသလား? ခင်မိုးဝါကို မုန်းသင့်ပါသလား?
ကျော်နိုင်စိုးက ဇာတ်လမ်းရပ် မဆက်သွယ်တော့ပေမဲ့ မီမီအေးတစ်ယောက်ကတော့ ကျော်နိုင်စိုးတို့ အကြောင်းကို အမြဲစုံစမ်းလျှက်ရှိသည်၊ ကျော်နိုင်စိုးကို ချစ်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပေ၊ အမုန်းရန်ငြိုးများကို ပေးဆပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ ကျော်နိုင်စိုးမိန်းမ ခင်မိုးဝါ ကိုယ်ဝန်ရှိသည်လို့ကြားကတည်းက မီမီအေး၏အငြိုးနှင့် ဒေါသတို့သည် အထွက်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်၊ သန်လျင်မှ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် ဆက်သွယ်ပေးချက်အရ အစီအမံကောင်းသော ဒေါ်လုံးနဲ့ဆက်သွယ်မိခဲ့သည်၊ အစီအမံများကို အဆက်မပြတ်လုပ်လာရာမှ ဒီနေ့ ခင်မိုးဝါမွေးဖွားမည်ကို သိရသဖြင့် အထူးအစီအမံများ ပြုလုပ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၃၁ဘုံကျင်လည်ကြရာတွင် လူဘဝသည်ရရှိဘို့ မလွယ်ကူ၊ အကြောင်းကံတို့ကြောင့် လူဘဝသန္ဓေတည်ခွင့်ရသော်လည်း လူတစ်ယောက်မွေးဖွားလာဘို့ မလွယ်ကူကြောင်း သမီးကိုယ်တိုင်သိရှိခဲ့ရပါပြီ။
သမီး၏အတိတ်အကြောင်းကံတို့သည် သမီးကိုလူဖြစ်လာခွင့်မပေးခဲ့ပါချေ၊ လူလောကကြီးတွင် တစ်နာရီလောက်တောင် နေခွင့်တောင်မပေးခဲ့ပါသလား၊ တစ်ကြိမ်လည်းမဟုတ် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖြစ်ပါသည် တရားကြပါသလား လောကကြီးရယ်ဟု မေးလိုက်ချင်ပါသည်။
ပထမတွင် အမေ၏ဝမ်းထဲ ၆လအရွယ်မှာပဲ သမီးကို အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြပါသည်၊ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို လူသားအဖြစ်မရောက်ရှိသေးခင်မှာပဲ သမီးခံစားခဲ့ရသည်၊ ခံစားတတ်သည်ကို သူတို့သိရှိကြပါရဲ့လား၊ သမီးသေဆုံးခြင်းကို လူတစ်ယောက်သေဆုံးခြင်းလို့ သူတို့မှတ်ယူကြပါသလား၊ လူသားတစ်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းလို့လည်း သူတို့မှတ်ယူကြပါသလား။
လူမဖြစ်ခင်ကပင် သမီးလူတွေကိုမုန်းတီးနေမိပါပြီ၊ လူမဖြစ်ခင်ကပင် လူလောကကြီးကို သမီးတအားကြောက်၍နေပါပြီ၊ စစ်မှန်သော သစ္စာတရားများကိုရှာဖွေနိုင်သော လောကကြီးတဲ့ သမီးသံသယ ဖြစ်မိနေပါပြီ။
ပထမတစ်ခါသေဆုံးရတုန်းက သမီးမှာနာမည်တောင်မရှိခဲ့ပါ၊ မှတ်တမ်းလည်း မဝင်ခဲ့ပါ၊
ခုတစ်ခါတော့ သမီးရဲ့နာမည်လေးက ခင်ရူပါစိုး တဲ့၊ သေဆုံးကြောင်း မှတ်တမ်းတွေဘာတွေနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့် သေဆုံးရခြင်းပါလားလို့ တွေးမိခဲ့သည်၊
သမီး၏အတိတ်ကံအကြောင်းကလည်း သမီးကို လူဖြစ်စေချင်ပါသတဲ့လား၊
ဒီအဖေနဲ့ပဲ အမေနှစ်ယောက်စီမှာ သမီးလူဖြစ်ဖို့ ဖန်လာခဲ့ရသည်၊
ဒါပေမဲ့ သမီးလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပါ၊
ဒီအဖေကို သမီးအတိတ်ကြွေးတွေရှိခဲ့သလား သမီးကပေးဆပ်ဖို့လား အဖေကပေးဆပ်ဖို့လား၊ သံသရာဝဋ်ကြွေးတို့၏ ဆင်းရဲခြင်းကို သမီးသိခဲ့ရပါပြီ၊
သမီးရဲ့ကောင်းသောကုသိုလ်ကံ တစ်ချို့များကျန်နေသေးရင် သမီးကို လူဖြစ်ခွင့်ပေးကြပါ၊
ပထမအမေရယ် အမေ့ဆီမှာသမီး ၆လသန္ဓေမှာ သမီးအသေဆိုးနဲ့ သေခဲ့ရပါတယ်၊ ဒီတစ်ခါလည်း အမေကသမီးကို သေစေချင်သတဲ့လား၊ သမီးအမေ့ကို ပေးဆပ်စရာရှိရင် ကျေပါတော့အမေရယ်နော်၊ အမေရဲ့ ရန်ငြိုးတွေအတွက် သမီးကို မပေးဆပ်ပါနဲ့အမေ၊
သမီးကို လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါ၊
အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ရင် သစ္စာတရားတွေနဲ့ အမေ့ကိုသစ္စာကျေးဇူး အတိတ်အကြွေးတွေ ဆပ်ပါမယ်ဆိုတာ သမီးကတိသစ္စာပြုပါတယ်အမေ၊ သမီးကို မသတ်ပါနဲ့တော့ အသက်ရှင်ခွင့် ပေးပါအမေ၊
သမီးကို မသတ်ပါနဲ့တော့ အသက်ရှင်ခွင့် ပေးပါအမေ၊
သမီးကို အသက်ရှင်ခွင့် ပေးပါအမေ။
မနက်စောစောထဲကနေ ညနေမိုးစချုပ်ပြီဆိုတော့ ဒေါ်လုံးရော မီမီအေးပါ ပင်ပန်းနေကြပြီဖြစ်သည်၊
မီမီအေးတစ်ယောက် ပူဇော်ပသနေရင်း မိုက်ခနဲ့ မိုက်ခနဲ့ ဖြစ်သွားသည်၊ မိုက်ခနဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့သော မိမိသန္ဓေသားလေး ငိုနေတဲ့ပုံ ပေါ်ပေါ်လာသည်၊ မွေးစကလေး ငိုသံလိုလို ကြားမိပြန်သည်၊ မွေးစကလေး ငိုသံများက မီမီအေးစိတ်ကို ရိုက်ခတ်စေသည်၊ ဘေးကဒေါ်လုံးက စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထား အပြီးရောက်နေပြီ အဖျက်မဝင်စေနဲ့လို့ သတိပေးနေသည်။
ထိုအချိန်တွင် ဒါယိကာမကြီးတွေ ဘာလုပ်နေကြပါသလဲ ဆိုသံနဲ့အတူ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့လိုက်ရသည်၊
ဒေါ်လုံးက တပည့်တော်တို့အလုပ် တပည့်တော်တို့ လုပ်နေတာပါ၊ ဘုန်းဘုန်းလည်း ဘုန်းဘုန်းသွားလိုရာကို သွားပါ ဆိုပြီး ဆက်ရွတ်ဖတ်နေသည်၊
မီမီအေးသည် ဘုန်းကြီးကို မော်ဖူးကြည့်လိုက်မိသည်၊
ဘုန်းကြီး၏မိန့်သံကို ကြားသောအခါ မီမီအေးလက်တို့ တုန်တုန်ရီရီဖြစ်သွားသည်၊
တုန်တုန်ရီရီ ဖြစ်သွားသည်မှာ ညင်ညင်သာသာဖြစ်သော်လည်း ဘာရယ်ကြောင့်မှန်းမသိ လက်နဲ့ငှက်ပျောအူသေးလေးနဲ့ ဆက်ထားသော ကြိုးများပြတ်ကုန်သည်၊ ဒေါ်လုံးသည် ဝမ်းနည်းဒေါသသံကြီးဖြင့် ပျက်ကုန်ပြီ စည်းပျက်သွားပြီ ညည်းလုပ်လိုက်တာပဲ၊ ညည်းဟာညည်းနေခဲ့တော့လို့ဆိုပြီး ဒေါသတကြီးနဲ့ပြောပြီး ရွာထဲသို့ဝင်ရောက်သွားသည်၊
မီမီအေးလည်း ဒေါ်လုံး ဒေါ်လုံးဆိုပြီး ထလိုက်မည်အပြုတွင် ဆက်ထားသောကြိုးကိုဆွဲမိသဖြင့် ငှက်ပျောအူအကြီးပြုတ်ကျသွားသည်၊ မီမီအေးလည်း လဲမလိုဖြစ်သွားသည်၊ မီမီအေးမထနိုင်တော့၊
ဘုန်းကြီးက နောက်ကဒါယိကာမတွေမြန်မြန်လာ ဒီဒါယိကာမလေးကို ကျောင်းခေါ်ခဲ့။
ခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလုံး သမားတော်တွေ ပါရဂူတွေ ဆရာဝန်တွေ နပ်စ်တွေ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကို နားမလည်ဖြစ်နေကြသည်။
အေမီအောင်သည် ကလေးကို ခေါင်းကလေးပွတ်သတ်ပေးနေရာမှ မျက်နှာက အရာလေးကို ပွတ်သတ်ပေးလိုက်မိသည်၊
တစ်ခါနှစ်ခါ ပွတ်သတ်ပေးပြီးသောအခါ ကလေးသည် စူးစူးဝါးဝါးထငိုတော့သည်၊
အူငဲ၊ အူငဲ၊ အူငဲ
ကလေး၏ငိုသံကြောင့် သမားတော်တွေ ပါရဂူတွေ ဆရာဝန်တွေ နပ်စ်တွေ ခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလုံး အထိန့်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြသည်၊ အေမီအောင်လည်း တုန်လို့သွားခဲ့သည်၊ သေပြီဆိုသော မွေးစကလေးလေးသည် သူမလက်ပေါ်တွင် ငိုယိုလို့နေပြီ၊
သေပြီဆိုသော ကလေးလေး၊ အသက်မရှုတော့သည့်ကလေးလေး ထငိုသည်ဆိုတော့ အာလုံးက အေမီအောင် ဘာလုပ်လိုက်သလဲဆိုသည့် မျက်လုံးများ အံ့သြမှုများဖြင့် ကြည့်နေကြသည်၊
ပါရဂူကြီးသည် အေမီအောင်ဆီက ကလေးကိုယူပြီး အနည်းငယ်စမ်းသပ်မှုများလုပ်ကာ၊ သမီးလေး ခင်ရူပါစိုးကို ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်တွင် ဖွားမြင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရန်ညွှန်ကြားလိုက်ပြီး၊ ကလေးကို ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးထံ အပ်လိုက်သည်။
ကျော်နိုင်စိုးသည် အေမီအောင်ကို ထိုင်ရှစ်ခိုးမတတ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ်ပြောလို့နေသည်။
ထိုနေ့က JJ ဆေးရုံကြီးသမိုင်းတွင် သမားတော်ကြီးများ ပါရဂူကြီးများ အများဆုံးပါသော အထူးဆန်းဆုံး ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှုဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊ သမားတော်ကြီးများ ပါရဂူကြီးများသည် ဘယ်လို Report ရေးရမလဲကို တော်တော်စဉ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။
သမီးလေး ခင်ရူပါစိုးကို မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
There is something modern medicine and medical technology cannot do.
There is something modern theory and knowledge cannot explain.
သမီးလေး ခင်ရူပါစိုးသည် ကျန်းမာကောင်းမွန်၍ Incubation တောင် မလိုတော့ဟုသိရပါသည်၊
သူမ၏ မျက်နှာ ကုသမှုကို JJ ဆေးရုံကြီးမှပင် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သောအချိန်တွင် အခမဲ့ ကုသပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်၊
ခင်မိုးဝါမှာ အောက်ပိုင်းသေသလို ဖြစ်နေ၍ ဆေးဆက်လက် ကုသနေရပါသည်၊
မီမီအေးကို ဘုန်းကြီးက ကာလီဘီလူးမ တရားတော်များဟောကြားခဲ့ပါသည်၊
မီမီအေးသည် သန်လျင်တရားစခန်းတစ်ခုတွင် တရားစခန်းဝင်နေကြောင်းသိရပါသည်။
ဆေးပညာအသုံးအနှုန်းများ မှားယွင်းခဲ့သော် ကျနော်၏ အမှားပင်ဖြစ်ပါသည်၊
Posted by sosegado at 10/13/2011 11:59:00 AM 27 comments Links to this post
ခင်မိုးဝါ၊ မီမီအေးနှင့် ကျော်နိုင်စိုး၏သမီးလေး ခင်...